यस वर्षको बजेट अभूतपूर्व रुपले पूर्व सुब्बाले `लास्ट टच´ दिएपछि हाम्रो अर्थमन्त्री काम्रेस धनाअार्जनले संसदमा बाचन गरे । मध्यरातमा एउट विदेशी र पूर्व सुब्बा साप अर्थमन्त्रालयको गोप्य कोठामा छिरिकन कामकुरो तमाम गरेछन् । त्यस बेला सचिव सहसचिवहर्ले बोल्न पनि पाएनन अरे । हाम्रो धनाअार्जन काम्रेसले पत्याएका सुब्बाका अगाडि नाथे सचिव सहसचिव । त्यो `सिसी क्यामेरा´ भन्ने पड्केले चाहिँ कस्तो छिटो देखेका हुनन । एमालेहर्ले भने त्यही सिसी क्याम्रा हेरेर हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई कार्वाही गर्ने भनेका रान । हाम्रो धनअार्जन काम्रेस झन के कम ठाडै हेर्न पाम्मदैनौ भनी दिए । हैन किन हेर्नु त्यस्तो सिसी क्याम्रा ! यसो एक-दुई अर्व त अाइरहने बाटो बनाउनु स्वभाविकै हो त । मारिवाडीको समस्या पनि त हेर्नु पर्छ । चौधरी ग्रुपले ८/१० अर्व अनि अाफू अर्थमन्त्री भको बेला धनअार्जन काम्रेसले २/४अर्व कमाउनु कुन ठूलो कुरो होर !
प्रचन्न काम्रेसको पनि खर्च ठूलो छ । पार्टी पनि चलाउनै पर्यो, कार्यकर्ताहर्लाई पनि दिनै पर्यो, बेलुका भएसी तलतल लाग्छ महंगो खालको यसो विदेशी एक दुई बोतल भए कालिज अथवा बंदेलको भुटुवासँग चिरिप्प पारेसी अानन्दको निद्रा लाग्छ । कठै ! भरतपुर लगायतको चुनाउमा पनि सानो खर्च भएन । यस्तो पेचिलो अवस्थामा अर्थमन्त्री धनअार्जले बिलोका रुपमा काम्रेस प्रचन्नलाई १०/२० अर्व दिनु त सामान्य नै मान्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा प्रचन्न काम्रेस नभए राष्ट्र पनि रहदैन भन्न थालेकाछन् हाम्रा माअोवादीहरू । हुन पनि हो यत्तिको चतुरे, उच्च छलाङका जन्म दाता, अाइस् ब्रेकका निर्माण कर्ता, अोली र देउवाको गर्धनमा टेकेर खप्परमा बजाउदै सत्ताको तर मार्न माहिर यत्तिको नेता नेपालमा छैन । मलाई भने यिन्का भनाइ र गराइको घुलन देखेर गज्जब सन्तुष्टि मिलेको छ ।
त्यस बखत हामीकन हतियार बोकेर मान्छे ठुन्क्याउन लगाए । त्यो गलत थियो पनि भनेनन् । उनी त हामी सपको छोडीकन काठमाडौंतिर कुलेलम ठोकी गए । संसदीय व्यवस्था जस्तो घृणित व्यवस्था अरु हुनै सक्तैन भन्थे । त्यही व्यवस्थाको दुई पटक प्रधानमन्त्री भएर राजसी ठाँटबाँटमा सामन्ती सत्ताको बागडोर समाले । हेर्दाहेर्दै हाम्रो काम्रेस प्रचन्न कहिले देउवा, कहिले अोली, फेरि देउवा फेरि अोलीलाई अंगालो हालेर तर मार्दैछन् । खप्पराँ लेखेर ल्याका रान । दिल्लीमा बस्ता पनि उनाईले मोज गरेका हुन र यहाँ राजासँग मिलेर तर मार्ने भन्दाभन्दै भाग्यले उद्धुम गरेर राम्रो गर्यो ।
नमस्कार है विध्वंसे काका ! दिमाखमा के खुराफात भर्दै छौ ? तिम्रो पनि दिमाख त लर्तरो छैन । ठाम पाको हो भने प्रचन्न भन्दा कम हुने थएनौ ! अनि हौ काका काठमाडौंतिरको अालो खबर के छ ? तिम्रा माउवादी काम्रेसहरू के भन्दै छन् ? अबको राजनीति कता लान्छन् अरे !
हेर भिरघरे ! काठमाडौंबाट मलाई कसैले फुन गर्दैन । पत्रपत्रिका, अनलाइन र अन्तको समाचार पनि पत्याउने खालको लेख्दैनन् । हाम्रो पत्रकारहर्ले `साउदीको राजकुमार सक्कली हो कि नक्कली, दुर्गा प्रसाईंलाई उपहार दिएको लौरो सुनको कि ठुन्को´, उदण्ड अालेले बोलेको महावाणि जस्ताको तस्तै समाचार बनाम्न मिल्छ कि मिल्दैन, विमला अोलीलाई के गर्ने ? अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै राजकुमार र लौरो सक्कली हो, अालेले बोलेकै छैन, विमला निर्दोष छन् र धनअार्जन शर्माले राजिनामा दिनु पर्दैन भनेर लेखेर बसेका छन् । म त सोच्न पनि मुन लाग्न छोड्यो ।
अनि माधवका मन्त्रीहरू फिर्ता हुने कि नहुने ? न्यायाधीश र उकिललाई अडियो मुद्दा लाम्ने कि नलाम्ने ? उकिल हरिहर दाहालहर्को करोडौँको हुण्डी मुद्दालाई कसरी ढासढुस पार्ने ? पनि पत्रकार भाइहर्ले जोडतोडले उठाएकैहुनन क्यारे ! म त विचरा देउवाको पो हरबिजोग देखे । माधव भन्छन हाम्रो पुरान मन्त्रीहरू हटाएर हाम्रै नयाँलाई नियुक्ति गर्देउ । अनि माधव भन्दा अगाडि नै देउवाकोमा पुगेर प्रचन्न भन्छन् `माधवको कुरा नमान्नु नत्र हाम्राहर्ले पनि विद्रोह गर्छन् । अब पाँच महिना त होनि ! फेरबदल गर्नु हुदैन । अहिले कस्तो राम्रो कमाइ भैरा छ ।´ गठबन्धनको बैठकमा कृषकलाई चाहिने मल समस्या समाधानको कुरो छैन, विद्यार्थीलाई किताबसमेत दिन नसकेको प्रति एक शब्द उच्चारण हुदैन । मन्त्रीहर्ले मनपरी गरी राछन् त्यसवारे कुरा उठदैन । बिचरो माधव मन्त्री फेर्न नसकेर निचोरिएर हिडेका छन् । यता देउवा जवाफ दिनुपर्छ भनेर भाग्दै हिडेका छन ।
ठिकै भन्यो सण्डे भाइले । यस्तो बेलामा प्रचन्न जस्तो उल्कै चतुरेले मल, किताब र मूल्यबद्धिका वारेमा कुरो ठाउनु पर्दैन ! अझ अाफ्ना कार्यकर्ताका अगाडि उफ्रिउफ्री `हामीले एमसीसी परिवर्तन गर्दियौ, व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेर अम्रिकाने पनि चकित, यता एसपिपी पनि खारेज गरेर राष्ट्र सर्लक्क बचायौ´ भन्दै थिए । यो एसपिपी भन्नेमा जे जति लेखिएको छ त्यो सप्पै एमसिसी पास गर्दै अोके भैसको छ भनेर जनताले बुझेका छन् । बरु प्रचन्नलाई नै थाहा छैन होला बुंदा बुंदा जोडाएर हेर अक्कल अाम्ने थियो कि ! सेना ल्याम्न पाम्ने , परेड खेल्न पाउने, जमिन उसैलाई दिनु पर्ने र नेपालको कानुन उनार्लाई नलाग्ने भन्ने त एमसिसीमा लेखिएकै छ त । अनि व्याख्यात्मक टिपणी, धोती र पारदर्शी लगौटी जस्ता फुर्का राख्न स्वीकार्य छैन भन्ने पनि सम्झौतामै छ त । अाफ्ना कार्यकर्ताले पत्याए जस्तो गर्दैमा अरुले पनि पत्यए भन्ने नठाने हुन्छ ।
वाइयात कुरो गर्दै प्रचन्न काम्रेसलाई खसाएर नबोल भिरघरे ! सप्पै समस्याको बारेमा प्रचन्नले बोल्नुपर्छ भन्ने के छ ? तेरो पार्टीको नेता देउवा प्रधानमन्त्री, समस्याका बारेमा चुइँक्क बोल्ने होइन । विकास बजेट खर्च भएन प्रचन्न, लोग्ने खोज्दै हिडेकी मन्त्रीलाई कार्वाही भएन प्रचन्न, नासुले बजेटमा फेरबदल गर्यो प्रचन्न, अर्थमन्त्री धनअार्जन शर्मालाई कार्वाही भएन प्रचन्न, अालेले फलान्थोक भने प्रचन्न । सप्पैथोक गर्न पर्ने प्रचन्नले अनि अर्थमन्त्री धनअार्जन शर्माले प्रचन्नलाई यसो ८/१० अर्ब बुझाएको पनि देखि नसक्ने तिमारू जस्ताले नै हो । यस्तो कुरा अाइन्दा मसँग नगर मेरो कन्सिरी तातेर अाम्छ ।
तिम्रो कन्सिरी अनौठै छ । किसानले समयमा मल पाउदैन तिम्रो कन्सिरी तात्दैन, विद्यार्थीले बेलामा किताब पाउदैन तिम्रो कन्सिरी तात्दैन, मूल्यवृद्धिले थाम्नै नसक्ने गरी बढ्यो, जनता पिरोलिएका छन् तिम्रो कन्सिरी चुपचाप निदाउछ, तिम्रो कन्सिरी र दिमाख काम लाग्ने खालको छैन काका ! हामी अब जाउ सण्डे । लौ काका फेरि भेटौला अाजलाई भने
स वर्षको बजेट अभूतपूर्व रुपले पूर्व सुब्बाले `लास्ट टच´ दिएपछि हाम्रो अर्थमन्त्री काम्रेस धनाअार्जनले संसदमा बाचन गरे । मध्यरातमा एउट …
केटाकेटी स्कुल जान छाडे । किताप भा पो जानु भनेर केटाकेटी घरमै थच्चिएका छन् । हुन पनि हो, पढने किता …
यसपालि बजारमा हाम्रो मन्त्री प्रेम अालेकै चर्चा छ । जेसुकै भने पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माधव नेपाल र हाम्रो प्रचन्नलाई अालेले …
चुनाउ सकेपछि गाँमघर त सेलाउनु स्वभाविक हो । तर, काठमाडौं पनि सेलाएको देख्दा भने अचम्म लाग्न थालेको छ । नेताहरू किन …
मैले जे विश्लेषण गरेको थिए ठ्याक्क त्यही पुग्यो । हाम्रो प्रचन्न काम्रेस लागिसकेपछि असम्भव भन्ने केही हुदैन । यसपालि नेपाली …
देखिस भिरघरे ! हाम्रो प्रचन्न काम्रेसको खेल । देउवा दाइको साथ पाएसी स्थानीय पालिका चुनाउलाई कसरी अाफ्नो पक्षमा पारे ! …
चुनाको नतिजा अाम्न थाली सक्यो । अब कापी निकालेर रेडियो सुन्दै हिसाब गर्न थालिन्छ । अाँसी-हम्मर र कलम चिन्हमा अत्यधिक …
चितवनको भरतपुरमा गज्जबको चुनाउ हुदैछ । यस्तो चुनाउ कि त्यहाँ छोरीले जिते यो नेपाल भन्ने राष्ट्र र नेपाली कांग्रेस भन्ने …
सकेर छाडे । जब जगन्नाथले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् तब मुटुमा किला ठोके जस्तो भयो । नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्ष, हाम्रो माउवादी …
नेपाली कांग्रेसकाहर्ले हाम्रो अाँसी र मार्तोल खोजेर भोट हाल्ला जस्तो छैन । `बुट्टो चिन्ह खोजेर छाप ठोक्ने, भट्टी जाने रक्सी …